Torohevitra sy antony mahatonga ny kitapo | Vaovao momba ny dia
Torohevitra sy antony mahatonga ny kitapo
Susana Garcia | | soso-kevitra, General, Tsangatsangana
Betsaka ny olona no liana amin'ilay hevitra hoe backpacking manerana izao tontolo izao. Fitsangatsanganana mahafinaritra io, izay ampiasantsika ny fahaizantsika mivoaka amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Izy io koa dia fomba iray hahafantarana ny tenantsika sy izao tontolo izao, tsy isalasalana fa ny fomba tsara indrindra hanitarana ny faravodilanitra sy hanokafana ny saintsika amin'ireo kolontsaina vaovao.
Hanome anao vitsivitsy izahay antony mahatonga ny kitapo, fa koa torohevitra mahaliana hahafahana manararaotra ny traikefa rehetra ary vokatra tsara daholo ny zava-drehetra. Raha tsy misy fisalasalana dia ilaina ny mamela ny tenanao ho entin'ny herin'ny maizina, fa tsy maintsy maka zavatra kasaina koa isika, satria azo antoka kokoa izany.
1 Fa maninona no atao kitapo
2 Irery sa miaraka?
3 Omano ny kitaponao
4 Mitadiava dia mora
5 Araraoty ny fampiharana
6 Mahita zorony kely
7 Manaova diary mba hahatonga ny fahatsiarovana tsy mety maty
Fa maninona no atao kitapo
Betsaka ny antony mety hitarika antsika amin'ny kitapom-batsy. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ity karazana traikefa ity manitatra ny faravodilanitra ary mahatonga antsika hiatrika tsara kokoa amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Rehefa mamakivaky firenena sy faritra tsy fantatsika isika, amin'ny fiteny sy fomba amam-panao samihafa dia manery ny tenantsika hiala ny faritra mampionona antsika izahay mba hianarana hifanaraka amin'ireo karazan-javatra rehetra. Izany dia mahatonga antsika hahay zavatra maro kokoa amin'ny karazana toe-javatra rehetra.
Antony iray hafa no mety maha-zava-dehibe ny ankafizo ny dia sy ny toerana itodiana amin'ny fomba hafa noho ny mahazatra. Aza atao fizahan-tany faobe ary avelao ianao ho entina amin'ny dia lavitra kokoa sy manokana amin'ny dia manokana, izay itondrantsika ireo zavatra ilaina ary ankafizintsika ny toerana tsirairay.
Irery sa miaraka?
Raha resaka backpacking dia maro ny olona misafidy ny hanao izany irery noho ny antony maro. Tsy ny olon-drehetra no afaka miala sasatra lava, ary koa satria sarotra ny mandamina ny dia miaraka amin'ny olon-kafa, satria tsy maintsy azonao ny fomba fitetezana amin'ny fomba mitovy amin'izany. Tsy ny olona rehetra no tia manao kitapom-batsy avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Ny mandeha irery dia midika koa fa tsy maintsy ataontsika mifandray bebe kokoa amin'ny olona fa hihaona eny an-dalana isika, zavatra tsara ho an'ny traikefa, saingy ho fatiantoka izany dia tsy hahatsapa ho voaro loatra isika ary tsy maintsy mitandrina arakaraka ny toerana misy antsika.
Omano ny kitaponao
Rehefa manamboatra ny kitapom-batsy ianao, ny torohevitra tokana tokony homenay dia ny tokony hataonao ento ny fotony fa tsy zavatra hafa. Toileta, indrindra ireo izay ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany, sunscreen ary kitapo vonjy maika. Ny akanjo tena ilaina, satria hijanona amin'ny toerana ahafahanao manasa lamba izahay. Raha ny resaka mandeha amin'ny kitapom-batsy dia tsy tokony milanja loatra, ary tokony ho tsapanao fa ho entintsika mandritra ny fotoana lava io, noho izany dia tsy maintsy mitondra ny fototra fotsiny isika, fa ny sisa rehetra dia tavela eny an-dalana.
Mitadiava dia mora
Backpacker tsy mandeha amin'ny rendrarendra mihitsy. Izany hoe, momba ilay izy jereo izao tontolo izao amin'ny fomba tsotra, mankafy ireo zavatra kely ary tsy mandany vola be. Androany tsy mila mahafoy sidina na fitaterana haingana sy mahomby isika, fa amin'ny App dia afaka mahita dia mora kokoa isika. Misy ny rindranasa mampitaha sidina sy mahita ny mora indrindra, fa manana forum ihany koa izahay mba hizaran'ny olona ny zavatra niainany hahalalany izay ho lany sy izay tsy ho laniana. Ny fampahafantarana antsika dia lakilen'ny fisorohana lesoka be loatra rehefa manao ny dia ho toy ny kitapom-batsy. Ny vaovao tsara dia ny fahafahantsika miditra amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny findaintsika saika na aiza na aiza ankehitriny.
Araraoty ny fampiharana
amin'izao fotoana izao misy fampiharana ho an'ny zavatra rehetra. Tsy mila fanampiana isika rehefa manomboka ny dia raha mahita App izay mahasoa ho an'ity tanjona ity. Avy amin'ireo rindranasa mandika ny afisy amin'ny fiteny izay tsy azontsika ireo izay mitady trano mora vidy ho anay, na ahafahanay mahita ny hevitry ny olon-kafa momba ny karazan-toerana rehetra hahafantarana raha toerana tsara izany. Mampiasà teknolojia vaovao satria afaka manatsara ny fiainanao izy ireo.
Mahita zorony kely
Ny iray amin'ireo zavatra tadiavin'ny ankamaroan'ny olona raha ny amin'ny valizy dia ny mahita zoro kely. Rehefa mandeha amin'ny toerana efa nandehananay fiara foana isika dia hitantsika amin'ny fomba hafa ny zava-drehetra, satria izany no mitranga rehefa manao dia tsikelikely mankany amin'ny toerana fizahan-tany isika fa tsy mandeha fiaramanidina fotsiny. Hahita toerana maro izay mendrika azy isika, ary hanana traikefa tsy manam-paharoa. Tsy maintsy mankafy ny dia sy ny toerana itodiana ianao.
Manaova diary mba hahatonga ny fahatsiarovana tsy mety maty
Mety hanadino izay rehetra niainantsika isika, ka hevitra tsara ny manao karazana kahie fitsangatsanganana na diary izay ahafahantsika mandeha ao anatin'izany ireo dingana sy zavatra niainana, miaraka amin'ny sary. Fomba iray hahatsiarovan-tena amin'ireo fotoana ireo any aoriana, rehefa hadinontsika ny maha-mahaliana azy ny ho backpacker, ka te hiverina amin'ny traikefa nahafinaritra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Torohevitra sy antony mahatonga ny kitapo
Ankafizo herinandro ao Jamaika